Inwele yam emilenzeni iphupha: ukucheba iinwele zam emilenzeni yam ephupheni, ezinwele ezinwele
Ukuphupha imilenze emilenze
Yiyiphi ixwayisa malunga nephupha oye wabona imilenze eluhlaza? Ukutolika
Iinguqu ezininzi zephupha ziphatha iphupha malunga nemilenze enomzimba njengophawu lweemeko zemali kunye nesimo semali esisigxina, kodwa ukuze uguqulelo luzaliswe ngokupheleleyo, kubalulekile ukuba ukhumbule ngokucophelela zonke iinkcukacha zesalathiso nokubonakala kweenyawo. Ekubeni kuneengcamango ezininzi ezingenangqondo malunga nemibono yasebusuku, sifanele sithethe ngoku.
Ziyabukeka njani imilenze eluhlaza?
Kwincwadi yephupha likaMiller ibhaliwe ukuba iphupha elinjalo libonisa uhambo olukhawulezayo. Ukuba iinwele emilenzeni zide, indlela iza kuba neengxaki kwaye kuya kufuneka ukhuthazelele ixesha elibi, ukulibala.
UFrud ukholelwa ukuba intombazana ikwazi ukuphupha imilenze emilenze, ngokwazo okanye kumntu, ukuba ubuhlobo bomntu siqu yena nguye oya kuba yinkokheli. Indoda yokuphupha iminqweno yemilenze yakhe enezinwele ezithobelayo ukuzithoba kwisini esilungileyo emsebenzini.
Ibhinqa eliyibonile imilenze enomlenze ephupheni, kufuneka ukhangele ngokukhawuleza kwiindawo ezikuyo. Kusenokwenzeka ukuba abantu abatsha abanomdla kakhulu kumphuphi kwaye banokuba ngabahlobo bobomi.
Indoda eye yabona izinwele emilenzeni yakhe kunye nomfazi ingalungiselela kalula impumelelo. Baya kuhamba naye kuzo zonke iinkalo zobomi ngaphandle kokungafaniyo: emsebenzini, ukufundisisa kunye nangaphambili.
Qiniseka ukukhumbula ukuba ziphi iinwele ezinemibala. Kule nto kuxhomekeke kwizinto ezininzi kunye neziganeko ngokwenene.
Umbala weboya ephupheni
Umhlophe okanye uthetha ngendlela umculi acinga ngayo ngokufa nokuguga. Ukuba nesimo sengqondo esinokubangela ukungathembeki kuthintela ubomi kunye nokufezekisa injongo.
Izinwele ezibukiweyo emilenzeni - uphawu lokungazineliseki ngobomi besondo kunye neqabane.
Izinwele ezimnyama ezinde ephupheni zi lumkisa intombazana ekusondeleyo ukuba ibe lixhoba leentlanzi kunye neengcungcuthe zabangenayo. Amadoda afana nalo mbono athembise ukuthanda kunye nokuphumelela kwimpilo ebusondeleyo.
Umbala obomvu obomvu wowesifazane ngumqondiso wokukhulelwa okukhawulezayo. Kwindoda, eli phupha alilona lihle. Olu luhlobo lwesilumkiso sokuba kufuneka alumkele ukubonakala kwakhe, ngaphandle koko ubeka ingozi ekulahlekelweni ukuthandwa phakathi kwesiqingatha esihle.
Shave iinwele zakho ezinyaweni zakho
Kwiinkcubeko zasendulo, ukulahla iinwele (kwanokuba ukukhanda izinwele) kwakucatshangwa njengobonakaliso obubi. Ngaloo mihla, abantu babekholelwa ukuba kwakunjalo kwizinwele apho amandla onke omntu efihliwe kwaye emva kokuvafa, wafunyanwa ukukhuselwa.
Ukuba umphuphi ubona yakhe imilenze enezinwele kwaye unomnqweno onamandla wokubacebisa, ngoko ngokwenene uya kudibanisa kunye nokuba yonke iminqweno namaphupha akhe akakwazi ukuhlala okwenene okwethutyana.
Ekubeni kwezinye iincwadi zephupha i-hairline ephakanyisiwe kwimilenze ibhekwa njengophawu lokukhusela, kukho ukutolika okucheba inwele kuthetha utshintsho oluya kumthintela umphuphi wenduduzo eqhelekileyo.
Enye into ebalulekileyo kukuba izenzo ezinjalo kufuneka zithathwe njengesidingo sokwenza isisombululo esingaqhelekanga sokunqoba imeko yobomi obunzima.
UMiller uthi ukucheba iinwele ezinzima emilenzeni yakhe kubonisa ukuba umntu ophuphayo uyaziphethe kakuhle, unesivi kakhulu kwaye ngoko akanako ukuphumeza isikhundla esifanelekileyo kuluntu okanye kumsebenzi.
Ukuba indoda yayimelwe ikhweze imilenze kumntu ongaziwayo, ngoko kwixesha elizayo unenkxalabo, engayikuthintela. Badibana nezinto eziphathekayo. Kungabikho ukulahleka kwezinto ezixabisekileyo ngenxa yombutho omkhulu okanye ukweba.
Ungayichaza njani iphupha olahlekelwe ngayo isikhwama?
Ukuzalela inkwenkwe ephupheni: yayiya kuba yintoni?
Ukumba amazambane kwiphupha
Ukutolika kwamaphupha: yintoni inja ephuphayo ngayo
I-quarrel: indlela yokuyichaza eli phupha?
Isikhubekiso: kutheni umntwana efunda kakubi?
I-Fortune-Telling ngeKrisimesi: indlela yokunika ikhredithi kumntu omthandayo
Iziqhamo zePilpefruit ezicatshulwa
Ngaba ndingasebenzisa ioli oxolin ngexesha lokukhulelwa?
Iimpawu zesiLatin American cuisine
Ikhefu lokusebenza lokukhulelwa komfazi
Isicabucu se-spider mite on houseplants
Ubungakanani ukutshata kwakhona kunokubhetele kunokuqala?
Umgcini wamehlo aseHollywood aninzi aluhlaza
Indlela yokunciphisa umzimba ngokuhlamba?
Indlela yokukhulisa umntwana omhle